Mid ka mid ah garsoorayaashii Soomaaliya iyo Kenya oo geeriyooday | KEYDMEDIA ONLINE
Mid ka mid ah garsoorayaashii Soomaaliya iyo Kenya oo geeriyooday
Garsoorihii ugu saameynta badnaa dalka Australia, geybna ka ka ahaa garsoorayashii dhageystay dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ICJ ayaa geeriyooday.
AUSTRALIA - Mid ka mid ah garsoorayashii dhageystay dacwada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ka socota Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ, James Richard Crawford, ayaa geeriyooday Isniintii 31 May.
James Richard, wuxuu ka mid ahaa 15 xubnood oo dhageystay dacwadda badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay, taas oo la filayo in ay go’aan kama danbays ah ka gaarto ICJ.
Crawford, oo u dhashay Australia, ayaa in muddo ah ka mid ahaa Garsooraha Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, wuxuu ahaa gar-yaqaan caan ah oo caalami ah, aqoonyahan, macallin iyo lataliye, waxana loo tix galiyaa qareenkii ugu saameynta badan ee abid soo mara Australia.
Ka hor inta aan loo dooran inuu noqdo garsoorayaasha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda sanadkii 2014, Garsoore Crawford wuxuu ahaa garyaqaan, Xeer ilaaliyaha guud ee Australia, Michaelia Cash, ayaana qirtay inuu ahaa u doode sare iyo ka qeyb gale in ka badan 100 kiis iyo doodo badan oo xusuus leh.
Crawford, oo ku geeriyooday da’da 72 sano, ayaa la filayaa in dhimashadiisu aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin go’aanka Maxakamadda, maadaama garsoorayaashu hore u gudbiyeen go’aannadooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa kalsooni ka muujisay in ay ku guuleysato kiiska badda ee Kenya duullanka ku tahay, waxaana la filayaa in ICJ oo go’aan rasmi ah ka soo saarto.